Ubuhle besifazane Makeup Tattooing
Bangaki abantu abazohlala emhlabeni, abaningi bayoba nemibono. Kodwa uma uzothola ukwakheka okuhlala unomphela, kungaba kuhle ukubuza umyeni wakho noma umngane ukuthi yini abantu abakushoyo ngokumisa okungunaphakade kowesifazane.
Noma awukwazi neze ukubika izimfihlo zabesifazane bakho nhlobo. Masihlale imfihlo.
Ukwenza isipiliyoni esingapheli kuyisitayela esisetshenziselwa amehlo, amashiya nezindebe. Ukuhlupheka okunjalo okwenziwe iminyaka eminingana. Khona-ke ungaqhubeka futhi.
Kukhona ukwakheka okungunaphakade okuzithokozisa, okuzokusindisa esidingo sokusebenzisa izimonyo zokuhlobisa nsuku zonke, ne-cosmetology, engakwazi ukufihla izibazi zokuzalwa nezibazi.
Ukwenziwa okuphakade kusetshenziselwa ungqimba ophezulu wesikhumba, hhayi ngokujulile njengombhalo ovamile. Ngakho-ke, ihlala eminyakeni emi-3 ukuya kweyesihlanu. Kunezikhathi lapho ukwenziwa ngokuzenzekelayo kunganconywa: ngesikhathi sokuya esikhathini, ngokucindezela kwezifo zesikhumba, ngotshwala neminye imithi. Ukumiswa okuqhubekayo okungahambisani nabantu abanesifo sikashukela ne-asthma, ne-herpes, isikhumba negazi. Ungenzi makeup ngesikhathi sokukhulelwa. I-contraindication eyinhloko, lapho ukwakheka okuphakade kungavinjelwe khona, kungukubunjwa kwezibazi ze-keloid.
Uma ukwakheka okuqhubekayo kwenziwa endaweni ekhethekile ye-salon, khona-ke kuphela amapende aphakeme kakhulu emifinini noma emaminerali asetshenziselwa ukusetshenziswa kwayo. Inqubo yesicelo ayibuhlungu ngokuphelele futhi ithatha cishe ihora. Ukuze kutholakale ukukhwabanisa kwemvelo, inqubo iphindwe izikhathi ezingu-2-3.
Uma umuntu wakho ejwayele ukukubona ngokuzenzele unomphela, kungcono ukuqhubeka uphinde uqale. Umngane wakho kungenzeka ukuthi akaqageli ukwakheka okuhlala njalo, kodwa uthanda ukukubona njengoba asetshenziswe.
Amadoda angcono kakhulu kunabesifazane, ngakho-ke uma uzokwenza ukwakheka, kungenzeka ukuthi indoda iphikisana nayo. Hhayi ngenxa yokuthi uzoba mnandi noma, ngokuphambene, ungamhle kakhulu. Amadoda athande umkhuba, noma ngamanye amazwi, uma ekuthanda ngenxa yokuthi ungubani, kungcono ukuhlala kanjalo. Ngaphezu kwalokho, amanye amadoda anesimo esihle sokubukeka, isibonelo, afisa ama-blondes afanayo. Uma owesifazane eguqula kakhulu ukubonakala kwakhe, umngane wakhe uzodumazeka, ngezinye izikhathi ngisho nokuholela ekuphuleni ebuhlotsheni.
Yiqiniso, ukwakheka okuhlala njalo akunakwenzeka ukuletha umuntu kulokhu. Kodwa kaningi uzozwa umbuzo: kuthiwani? Okungukuthi, uma ukwakheka kukwenze "kube ngcono", bese kuthi ngemva kokunyamalala kwesikhathi, uzoba "kubi kakhulu." Kunzima indoda ukuba iqonde ukuthi ukwakheka kungavuselelwa.
Ngaphezu kwalokho, indoda yakho ingakhathazeka ngempilo yakho. Ukwesaba kwakhe kungase kulungiswe, kukhona ingozi yezinkinga. Umdwebo ungaphula kahle bese ushiya amabala, imigqa ingaba yiziphambeko futhi ingacacile, ngezinye izikhathi kunzima ukukhetha umbala ofanelana nombala wesikhumba sakho. Ngakho-ke kubalulekile ukuthi uphenduke ngokushesha enkosini enhle. Amathuba okucindezeleka aphansi kakhulu uma i-anesthesia kanye nenzalo yezinsimbi zomculo yenza kahle, futhi imikhiqizo emihle kuphela esetshenziselwa ukwenza izimonyo. Inkosi kufanele icabange ukuthi owesifazane angagcina enquma ukushintsha umbala wezinwele zakhe, uqale ukugqoka izibuko. Izici zomuntu ongashintsha ngeminyaka nazo zicatshangelwa. Ngaphambi kokufaka ukwakheka okungapheli, thintana nodokotela. Ukuzibambela okuhlala njalo ezindebeni ngezinye izikhathi kubangela ukubonakala kwe-herpes. Ngempelasonto ngaphambi kwenkambiso, udinga ukwenza i-prophylaxis, okuzokwaziswa udokotela noma i-cosmetologist, okuzokwenza ukuthi wenze uphethiloli.
Abantu abanokuzimela bahlukaniswa nobuhle bemvelo besifazane. Umuntu onjalo akakwazi ukubona ukuthi udayiwe kanjani. Uhlala ukhangayo kuye nganoma isiphi isikhathi nanoma yiluphi uhlobo. Ngisho nangemva kokulala ubusuku, ubuso obuvuvukile, kusengumuntu obuthandayo kakhulu futhi obomdabu. Ngakho uma uzokwenza ukwakheka komuntu othandekayo, cabanga, mhlawumbe akayidingi nhlobo.
Ngakolunye uhlangothi, kukhona amadoda angama-gourmet. Owesifazane kubo kufanele abheke "amaphesenti ayishumi" nganoma yisiphi isikhathi sosuku noma ubusuku. Ingabe uyazibuza ukuthi abantu bathi ngani ukwakheka okuhlala njalo kwabesifazane kuleli cala? Yebo, ukwakheka kuzovuma. Kodwa kungcono kungabonakali imfihlo yokubukeka kwayo okukhangayo.
Ukwenza isipiliyoni unomphela owesifazane uzophendula kahle kumuntu ongathandi uma owesifazane edayiwe isikhathi eside. I-make-up izosindisa isikhathi esiningi ekuseni, esingasinikelwa othandekayo. Noma ungalala isikhathi eside, le nketho izohambisana namadoda amaningi.
Ngakho-ke, amadoda akhuluma ngezinto ezihlukene zokuzenzela. Lapho ukwenza kwenziwe ngokusemthethweni, ngokuhamba kwesikhathi kuqala ukujabulisa wonke umuntu. Noma bavele bajwayele.
Ake sithole lo mbuzo: nini lapho kudingekile ukwazisa indoda ngokumiswa okuhlala njalo, futhi nini akufanele?
Icala lokuqala liyi-make-up yokuhlobisa. Uma unomshado othembekile futhi ovumelanayo, lo muntu ngeke akhathazeke, mvumele akhonce kancane ngokuhlonipha. Uma udlala isilingisi esibulalayo ... lapha ngaphandle kokuphawula, thula futhi uphakamise. Futhi uthi labo bazalwa.
Icala lesibili yi-make-up yezimonyovu efihla ukushiyeka okuthile. Ngesiza sokwenza unomphela, ungalungisa ukuma kwe-areola ezungeze izingono, upende phezu kwezibazi, amabala okushisa kanye nama-birthmarks flat. Uma wenza izimonyo ngaphambi kokuba uhlangane nomuntu wakho, kufanele uhlale uthule ngaye. Uma kufanele wenze ukwakheka unomphela ngemuva kokumazi eseduze, indoda engavamile ngeke ikusekele.
Ungabuza indoda yakho ukuthi ihamba ngendlela, kodwa yini umbono wayo ngalokhu? Nakuba umbono wakhe mayelana nokuzenzela unomphela ngokujwayelekile, futhi ngokuqondene nokwenziwe ngokukhethekile, ungahluka. Yiba njalo, kufanele sikhumbule ukuthi uma indoda yakho ikuthanda, khona-ke ikuthanda ukuthi ungubani. Futhi umbono wabo bonke abanye abantu awukuthandi.
Ukuzenzela okuhlala njalo - ukudweba imibala
Kuyini umdwebo wamashiya
Amaphutha wokuzakhela unomphela
Kulimaza futhi kuzuze ukwakheka okuhlala njalo
Inqubo yokusebenzisa ukwakheka okungapheli
Izindlela eziphumelelayo zokulahlekelwa kwesisindo ngokushesha
Ukuhlelwa kwethebula okulungile
Kungani ubuhlungu ngaphansi kombundu wesokunxele ngaphambili?
Indlela yokugcina ukushisa endlini
Ungabhubhisa kanjani amamaki eselulekile esiswini ngemuva kokubeletha?
Izindlela zokupheka ezilula zokupheka
Indlela yokukhipha futhi ukhulule imifino nezithelo
I-biography yomdlali we-actress uFanny Ardan
Yiziphi imikhiqizo okufanele ubeke kuzo ekuhluphekeni?
Imiphumela yomncintiswano "I-Autumn ebomvu" evela ku-Isotoner yenkampani
Amathiphu kubazali ngokukhulisa izingane
I-Ciabatta kuB Baker
I-spaghetti ebhaka ne-sausages